Wararka Maanta: Sabti, Oct 2 , 2021-Wasiir Bayle "Shalay haddii aan sagxadda taagnayn, maanta illaaheey waa noo roonaaday"
Wasiirka maaliyadda oo qabtay shir jaraa'id, ayaa sheegay, in mushaaraadka shaqaalaha dowladda iyo ciidamada, inta lagu jiro Doorashooyinka aysan dowladdu wax walwal ah ka qabin, ilaa dowladda cusub ay ka imaanayso.
Wasiir Bayle ayaa sheegay in hadalkiisa ku saabsanaa in " Sagxada" dhaqaaluhu yaallo si qaldan loo fahmay haddana dhaqaalaha dalka uu meel wanaagsan marayo.
"Arrinta Sagxada maanlintii aan sheegay Dhul-gariir ayaa dhacay dad ayaa dabaaldeggay. Siyaasadda iyo Maaliyadda waa wada socdaan. Sagaxda Illaahay ayaa hadda nooga roonaday maanta kama walwalayo mushaaraad la bixiyo ilaaa dowlad cusub ka imaanayso". Ayuu yiri Wasiir Beyle.
Wasiirka ayaa xusay in kabkii Miisaaniyadda ee dowladda ay siin jireen Hey'adda Caalamiga ah iyo saaxiibadda Soomaaliya ay joogsadeen balse lacagaha mashaariicda horumarineed ee Soomaaliya la siiyo ay socdaan.
Dhinaca kale, wasiirka maaliyadda, ayaa sheegay in mashaariicdan horumarineed oo ku kacaysa hal bilyan oo dollar loogu deeqay Soomaaliya, mashaariicdaas oo lagu maalgalindoono, caafimaadka, waxbarashada, jidadka, iyo tamarta
" Waxaa jirta lacag $1 bilyan oo doollar ah oo uu Bangiga Adduunka bixiyay, qaarna uu soo dayn doono balse waa lacag loogu talagalay kaliya mashaariicda horumarineed, sida caafimaadka iyo kobcinta dhaqaalaha" ayuu yiri Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya.